Kiiska dilka Axmed Dowlo oo arrin ay kusoo korortay - Caasimada Online
Home Warar Kiiska dilka Axmed Dowlo oo arrin ay kusoo korortay
Kiiska dilka Axmed Dowlo oo arrin ay kusoo korortay
Muqdisho (Caasimada Online) – Saddex ruux oo lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen dadkii gubay, sidoo kalena dilay Marxuum Axmed Dowlo ayaa la soo qabtay.
Maamulka Degmada Yaaqshiid iyo Booliska degmadaasi oo iskaashaday ayaa suurageliyay inay gacanta ku soo dhigaan Saddex ruux oo lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen dadkii gubay, sidoo kalena dilay Marxuum Axmed Dowlo.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir C.raxmaan Yariisow ayaa bartiisa xiriirka bulshada ee Facebooka ku xaqiijiyay soo qabashada dadkan.
“Maamulka Degmada Yaqshiid iyo Booliska waxey ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan 3 qof oo geystay falkii waxashnimada aheyd ee loo geystay Marxuum Axmed Dowlo, waxaan u Mahadcelinayaa shacabka oo kaalin weyn ka geystay soo qabashada, waqtigii damiile baxsan jirey oo shacabka ku dhex dhuuman jirey wey dhamaatay.” Ayuu yiri Yariisow.
Booliska Soomaaliya ayaa horey waxa ay u sheegeen falkaasi in dad loo soo xiray.